Sakalavan’i Menabe Tontosa soamantsara ny Lohavony Tomboarivo
Tontosa tamin’ny alahady 28 aprily 2019 tany Menabe ny fanatanterahana ny fomba Lohavony Tomboarivo.
Fomban-drazana tsy maintsy atao alohan'ny fanantanterahana ny fomba hafa toy ny Lohavony Belo Tsiribihy, ny Tsiritsy … ny lohavony Tomboarivo, fomban-drazan’ny Sakalavan’i Menabe. Karazana fidiovana izy ity, ary amin'ny fararanon’ny volana aprily no fanaovan'ny Sakalava Menabe azy. Ireo Dady sy ny Ampagnito Kamamy Magloire no mitarika azy. Inoan’ny rehetra any Sakalava fa ho tahin-dRanahary sy ireo Raza matoy iaby ireo mahatontosa an’io fomban-draza io.